In Badan Ka Barro Toddobo Cunto Oo Lagu Yarayn Karo Barruurta Saaran Caloosha Ragga Iyo Dumarkaba,… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
In Badan Ka Barro Toddobo Cunto Oo Lagu Yarayn Karo Barruurta Saaran Caloosha Ragga Iyo Dumarkaba,…
Published: April 10, 2017, 12:54 am
Baruurta caloosha gasha ayaa noqotay xaqiiqo nolosha dad badan oo malaayiin dunida ku nool. Waxyaabo badan ayaa ka mas’uul ah baruurta caloosha gasha waxaana ka mid ah hab-nololeedka iyo habka isku aadka cuntada.
Ma yara baadhitaanka laga sameeyay waxyaabaha ku saabsan buurnida xadkeeda dhaaftay, dawada ugu muhiimsan ee ruuxa noocaas la siiya ayaa ah jimcsiga. Cuntada oo la yareeye xadiga aad ka qaadaneyso iyo jimicsi ayaa muhiim u ah in lagula dagaalamo baruurta caloosha.
Marka leys barbar dhigo wadamada horay u maray daka ku nool iyo dadka dalkeena farqi weyn ayaa u dhaxeeya tusaale waxaa aad u kala duwan cimilada dadkaasi, cuntada ay cunaan iyo hawada ay qaataan.
Dalka mareykanka waa dalka dadka aduunka ugu buurbuurani ay ku noolyihiin sidaa ay tahayna wey shaqeeyaan oo ma xanibto buurnidooda, halka wadamada soo koroya ay dhibaato ku qabaan. Hadaba waxaan kuu soo gudbinayaa ilaa Todobo cuntooyin oo kaa caawin kara in aad kula dagaalanto buurnida :
Boorashka (Oatmeal): Waa daqiiq ama budo laga sameeyo keeg ama doolshada quraacda waxey dhistaa murqaha waxeyna yareysaa xeydha, marka aroorti la soo tooso oo aad cunto quraac ahaan. Boorashku wuxuu kaa caawinayaa in aad mudo aadan gaajoon, laakiin hubso in aad macaan ama sonkor ku darin waayo uma fiicna.
Qare ama xabxab: cilmi baadhayaal ayaa soo saaray in qaraha/xabxabka uu yareeyo subaga jidhka kadib markii xayawaan lagu tijaabiyay mudo kooban xabxab/qare la shiiday , wuxuu kaloo saameyn ku yeeshaa dhiiga halbowlaha isagoo yareeya qatarta buurnida caloosha.
Yaanyada/Tamaandhada: waxaa ka buuxa fitimiino iyo kolorisar, kuwaa oo si toos ah buurnida caloosha ula dagaalama. Hadii 9 xabo yaanyada loo yaqaan oo -ox-octadecadienoic aad maalin walba shiidato wax weyn ayaad isaga dareemeysaa.
Wanka: Waa il qani ku ah fitimiin B, protein, iyo Tryptophan. Wanka waa badal caafimaad leh hadii hilibkiisa laga saaro subaga mararka qaarkeed waxuu horseedi kartaa cayilka, sida il tamar laga helo sidaa daraadeed waxa guuro unugyada taasoo keentay cayilka.
Raashinka badda: Waxyaabaha badda waa laga jecel yahay caalamka oo dhan sababtoo ah dhamaan waxyaabaasi waa kuwa aad loo hubo caafimaadkooda waana kuwa xakameeya baruurta, dagaal joogto ahna ku haya buurnida caloosha. Maqaayadaha sameeya waxyaabaha aan keenin buurnida intooda badan waxey isticmaalaan cuntada badda laga soo saaro. Dadka hilibka cad ee kaluunka iyo digaaga cuna wey ka caafimaad badan yihiin dadka hilibka guduudan cuna.
Qudrada cagaaran: waxaa caalamka looga yaqaanaa nafaqeeyaha, waxaa laga helaa faaidooyin badan, qudrada cagaarani waxey leedahay awood ay kula dagaalanto buurnida caloosha, waxaa ku yar waxa dhilin kara buurnida caloosha. Qofkii cuna qudrada cagaaran (salad) quraacda ka hor waxey siisaa caafimaad.
Shaaha: Shaaha bigeyska ah waa mid la cabo oo kaa caawin kara gubida baruurta caloosha, cabitaanka shaaha waa mid wax ku ool ah saliida gubaneysa ee jidhka, sida laga soo xigtay tirakoob dadka joogtada u caba shaaha 226 oo koloris ayey gubta maalin walba marka la cabo shaaha bigeyska ah, cab maalintii afar ilaa shan koob oo shaaha laakiin sonkor yuusan lahaan ama aad ha ugu yaraato.
By: Siciid Xagaa Afrax